ICaral, ukuvakasha kwemivubukulo ePeru | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Peru, Yini ongayibona
Peru yizwe elithakazelisa kakhulu, ngokombono wemivubukulo, eNingizimu Melika. Isiko laso licebe kakhulu futhi uzolithanda uma ungumthandi womlando kanye nemivubukulo ngokufanayo. Ubuhle.
Esikhathini esithile esidlule sakhuluma ngoHuayna Picchu futhi namuhla sekuyithuba lika I-Caral, enye yezindawo zemivubukulo okufanele uzivakashele. Kungamakhilomitha angu-182 kuphela ukusuka eLima, inhlokodolobha yasePeruvia, futhi ungazihambela noma ubhalisele ukuvakasha. Lapha sikushiya zonke izinketho kanye nakho konke odinga ukukwazi ukuze ukwazi.
2 Vakashela iCaral
3 Yini ongayibona kuCaral
Indawo yokuvubukula siseduze neLima, esigodini saseSpi. Abavubukuli bathi inezimbalwa iminyaka eyizinkulungwane ezinhlanu ubudala ngakho-ke ngalokho kuqomisana yidolobha elidala kakhulu ezwenikazi. Ngokusobala, i-UNESCO ikucabangele Indawo Yamagugu Omhlaba.
Inkimbinkimbi ye- amathempeli nezakhiwo, futhi akukho ukuswela amaphiramidi, Yakhiwa yilokho okwakuthiwa yiCaral Civilization okwathi ngokusho kongoti abasungule phakathi kuka-3 no-1800 BC Uma kucatshangelwa lokho Kwakuyisikhathi samanje nempucuko yaseSumer, India, China naseGibhithe. Enye imininingwane engeke yanganakwa uma kubhekwa ukwakhiwa kwamaphiramidi, akunjalo? Futhi umbuzo wokuthi kungani lezi zakhiwo zakhiwe emhlabeni wonke ubuya ngamandla ...
I-Caral ngamakhilomitha angama-23 nje ukusuka ogwini lwasePacific futhi empeleni singakuthola kusethi yezindawo zokuhlala endaweni efanayo, a isigodi esiluhlaza nesivundile, ngamagquma ayivikelayo. Kunezindawo eziyisishiyagalombili kodwa iCarl iyona ehlaba umxhwele kakhulu. Kuyamangalisa ukuthi la manxiwa awatholakalanga kwaze kwaba phakathi nekhulu lama-XNUMX, noma mhlawumbe kwakungcono, kepha kwakungabahloli bamazwe abathile baseNyakatho Melika abathi bamthola ngo-1949.
Eminyakeni engama-43 eyedlule isazi semivubukulo sasePeruvia sabhalisa amanxiwa kepha kwaze kwaba ngo-1979 lapho isiza savubukulwa khona futhi kusukela lapho kuqhubeka ukuhlola kwamanxiwa kwakukubi kakhulu. Ngokuthandana kweCarbon 14, abavubukuli babona ukuthi uCaral uneminyaka engama-5 XNUMX ubudala, ngakho-ke ukwazi ukuthi kushintshe konke obekucatshangwa ngempucuko yaseMelika. Vele, kuze kube namuhla akwaziwa ngokuqinisekile ukuthi kungani idolobha lashiywa noma ukuthi impucuko yawa.
KuCaral ungahamba ngemoto, uhambo noma isithuthi somphakathi. Uma ukhetha le ndlela yokugcina, kuzodingeka uthathe ibhasi eLima eliya enyakatho, eSupa, cishe amakhilomitha angu-187 ePanamericana Norte. Wehla emakethe yeSupe kanye nebhulokhi nje ukusuka endaweni onayo irenki yamatekisi ekuyisa eCarlal. Ungahlela ukuthi azokulanda ngesikhathi esithile avale yonke into.
Ngaphandle kwalokho ungathatha enye ibhasi elihlangene ukusuka endaweni efanayo ekushiya emnyango we-complex, imizuzu engu-20 ukusuka kuyo uhamba. Ngemoto uthatha umzila wePanamericana Norte kuze kube ikhilomitha eli-184, ngaphambi nje kwedolobha laseSupa, bese ulandela izimpawu ezikusa eCaral. Isakhiwo kuvulwa kusukela ngoMsombuluko kuya ngeSonto kusuka ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama kodwa cabanga ukuthi iqembu lokugcina ligunyaziwe ukungena ngo-4. Izinga lingu-11 soles wasePeruvia umuntu omdala ngamunye.
Ukuvakasha kuyaqondiswa, ophethe abasebenzi abafanelekile, futhi amathesi amasha angama-20 akhokhelwa amaqembu abantu abangama-20. KuseSpanish yize kukhona izimpawu kuzo zombili iSpanishi nesiNgisi. Bala ukuthi uhambo luyohlala kanjani ihora nengxenye. Amaqembu akhiwe angalinda ithuba lawo eReception and Rest Area enendawo yokudla nendawo yokugezela. Ngezimpelasonto abantu basemakhaya bathengisa imikhiqizo yabo kodwa phakathi nesonto kulula ukuletha okwakho ukudla namanzi.
Yini ongayibona kuCaral
Umuzi ongcwele lalakhiwe phezu kwethala okuyivikele ekuthambekeni kwemvelo futhi izakhiwo zayo zenziwe ngokhuni nangamatshe. Bangu imibhoshongo eyisithupha sezikwele eziphelele nezizindilinga, konke kusendaweni ye Amahektha angama-66 icishe yahlukaniswa izingxenye ezimbili, i-peripheral nendawo emaphakathi.
Endaweni emaphakathi lapho izakhiwo zokuhlala kanye nezakhiwo zomphakathi, ezinye zitholakala engxenyeni engenhla, ngasenyakatho nangamaphiramidi nezikwele eziyindilinga ezimbili ezicwile phambi kwazo, kanye nesikwele, nezinye ezisengxenyeni engezansi, eningizimu, ezinezakhiwo ezincane, i-altare, inkundla yezemidlalo kanye izindlu. Ngaphandle, emaphethelweni, izindawo zokuhlala eziningi ziqoqiwe. Kubukeka sengathi amaphiramidi, osayizi abehlukene, apendwe aphuzi namhlophe, kwesinye isikhathi abomvu. Banesitebhisi maphakathi nendawo phezulu kunamakamelo amaningana.
Iphiramidi enkulu kunazo zonke ingamamitha angama-28 ukuphakama futhi yikhadi leposi elijwayelekile leCaral. Enye inemihubhe engaphansi komhlaba nomgodi womlilo phezulu, enye ingamamitha ayi-18 ukuphakama. Ngayinye inezici zayo. Ngaphandle kwamabhilidi okutholwe yi izindwangu, izinsimbi zomculo kanye quipus zibalulekile. Eqinisweni, komunye wemipiramidi kwatholakala i-quipu, imicu namafindo ayesetshenziswa njengezinsimbi zokugcina ulwazi noma ukuxhumana, okubhekwa njengendala kunazo zonke ePeru.
Izinsimbi zomculo zomculo, amakonethi nemitshingo, izindwangu ezinemibala, amalokwe, amanetha okudoba, izintambo, izicathulo nama-geoglyph nakho kutholakele phansi okwenza umuntu acabange ukubuka isibhakabhaka. Abavubukuli bathi iCaral yayiyikhaya labantu abaphakathi kwenkulungwane neyizinkulungwane ezintathu, elinokungezwani okuphawuleka kakhulu kwezenhlalo phakathi kwabakhulu kanye nabantu abakholwayo kanye nabantu abavamile. Impucuko empeleni yayiphila ngokudoba kanye nezolimo kanti ucwaningo lukhombisa ukuthi bashintshisana ngemikhiqizo yabo nabanye abantu, okuyinto efana nenhlokodolobha yezomnotho esifundeni.
Ngalolu lwazi usukulungele ukungaphuthelwa yila manxiwa abalulekile emivubukulo, ePeru, eMelika nasemhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » ICaral, ukuvakasha kwemivubukulo ePeru
Ukuvakasha kwelanga nolwandle eColombia